Sidee kuu soo gudbin karaa Photos in iPad
> Resource > Transfer > Photos gudbiyo iPad ma noqon kartaa fududaynta
Kaliya aan doonayo inaan ogaado sida aan sawiro ka laptop in aan iPad wareejin karaa, waan ogahay iyaga waxaad email u diri kartaa laakiin waxaan doonayaa inaan ku riday dhowr sawiro on my iPad. Mahad badan. Debbie.
Saved sawiro badan oo on your computer iyo haatan doonayaa inaan iyaga lagu wareejiyo si aad iPad, sida iPad mini? Haddii aad tahay qof lover sawir oo aad rabto inaad maqsuud sawiro ku saabsan iPad wakhti kasta ama iyaga wadaagaan ka mid ah saaxiibadaa iyo qoysaskooda, waxaad u baahan tahay qalab dhinac saddexaad si ay kaaga caawiyaan in aad sawiro in iPad wareejiyo.
Halkan waa aalad wanaagsan oo aad u. Iyadoo Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) , aad awoodo in aad nuqulka photos in iPad ka computer aan la tirtiro sawiradii hore ee aad iPad.
Sida loo nuqul ka photos in iPad
Hoos waxaa ku tutorial ka faahfaahsan oo ku saabsan sawirrada koobi si aad iPad. Halkan, aynu u qaban la version Windows ah. The version Mac kaliya ka shaqeeya oo kale sida version Windows ma.
Tallaabada 1. Ku rakib barnaamijka iyo xiriiriyaan iPad in PC
Si aan ku bilaabo, rakibi barnaamijkan on your PC ka dibna waxaa ka daba duuban. Connect aad iPad in PC via cable USB ah. Barnaamijkan waxaa lagu ogaan doonaa ka dibna waxa ay u muujiyaan in Window-upka kooxda.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u taageersan noocyo badan iPad, oo ay ku jiraan 2 iPad, iPad mini iyo iPad bandhigay isha. Ka sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada macruufka 5, 6, 7, 8 iyo 9.
Tallaabada 2. nidaameed sawiro si fudud loo iPad
Tiirka tagay, guji "Sawirro" inay soo qaadaan suuqa kala sawirka. Riix saddexagalka "Add" ka dibna riix "Add Folder" hoos. Markaas suuqa kala browser file a soo booda. Dooro iyo dajiyaan folder sawir doonayo.
Ama guji "Add" si ay u abuuraan album cusub. Markaas furo album cusub oo guji "Add" mar kale sawiro wareejiyo iPad. Of cource, waxa kale oo aad ka furan kartaa Library Photo ah, oo guji "Add" in ay sawiro daro in aad iPad.
Inta lagu guda jiro habka wareejinta, idinku waajib ah inaad hubiso in aad iPad ku xiran waqtiga oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad dajiyaan karaa sawiro in iPad by jiiday iyo sawiro iyo fayl tagtey ka PC aad iPad. Hadaba, waxa ay dhab ahaantii sahlan oo wanaagsan.
Hambalyo! Waxaad u suurtagashay in ay u guuraan photos in iPad. Hadda, aad ku eegaan karo iyo iyaga mahad meel kastoo aad tagtidba, ama iyaga ula qoysaska iyo saaxiibada aad la wadaagto.
Fiiro gaar ah: Haddii aad dareentid in aad haysatid sawiro badan oo aadan rabin in mar dambe sii, waxa kale oo aad kartaa in aad tirtirto sawiradan on your iPad in Dufcaddii.
Tutorial video ee photos in iPad wareejinta.
Sida loo xogta ka qalab BlackBerry wareejiyo BlackBerry kale